6 Izitayela Zezinwele Ezilukiwe Ezinde Ezidumile Esebenzisa Izandiso Zezinwele – SL Raw Virgin Hair LLC.
6 Izitayela Zezinwele Ezilukiwe Ezinde Ezidumile Esebenzisa Izandiso Zezinwele
Januwari 06, 2021
Unyaka Omusha usufikile, futhi singase sidinge izinwele zezinwele ezivikelayo ukuze sigcine izinwele zethu zemvelo zisongekile. Uma kunguwe, kulungile, sinawe. Nazi izitayela zezinwele ezilukiwe ezingu-6 ezidumile zisebenzisa izandiso zezinwele ezihamba phambili emakethe.
Okuningi kwalokhu okwakudala okungaphelelwa yisikhathi, futhi okunye kuyashesha futhi kulula ukukwenza kodwa kubukeka kukuhle uma usuqedile. Konke kungenziwa ngezandiso zethu zezinwele ezigoqekile , t20> noma imikhiqizo yethu yezinwele ezigoqekile. Zizohlala okungenani amasonto ambalwa ngaphandle kwesondlo - vele wenze isiqiniseko sokuthi ulele kwibhonethi yakho ye-satin ukuze usize ukuyigcina ibukeka iyinhle.
Hhayi-ke sizogxumela kukho ngesitayela esidume kakhulu se-Box braid esine-twist.
Ama-Box braids angesinye sezitayela ezishesha kakhulu ukuzifaka nezandiso zethu zezinwele ezi-kinky curly futhi ezithandwa yizinwele eziMnyama. Vele uhlukanise izinwele zakho zibe izikwele noma onxantathu, usike i-kinky curl kusuka ku-weft bese uqala ukwenza ama-plait ngamanye. Ubude obuncanyelwayo busukela maphakathi nokubuyela emuva ukuya okhalweni ngalesi sitayela. Ngakho-ke qiniseka ukuthi uthola ama-kinky curly wefts ngobude azoncoma ama-braids akho.
Ukuqina kwalawa ma-braids (izigaba) kufanele kusekelwe ezinweleni zakho. Ngakho-ke, uma unezinwele ezincane ngokwemvelo, yenza ama-braids akho ebhokisi abe mancane. Uma izinwele zakho zijiyile, yiba nkulu ngendlela othanda ngayo.
Zinhle kakhulu njengoba igama liphakamisa ukuthi Ama-Goddess Braids ayisiqephu sesitatimende kanye nogqinsi, inguqulo egqamile yamaluko avamile noma ama-cornrow. Ungakha izinwele zezinwele ezilukiwe zikankulunkulukazi ukuze uthole ama-braids okuphakelayo, ama-cornrow ajwayelekile, nokuningi. Ungazenza phezulu zibe ponytail, uzishiye zikhululekile noma udale i-updo ephothiwe. Esithombeni esingenhla umdwebi unqume ukwenza imiluko emibili emikhulu kankulunkulukazi abe yiziluko ezimbili ezigoqekile. Lokhu kuhle kakhulu. Lokhu kubukeka kungafezwa kusetshenziswa izinyanda ezimbili kuphela zezandiso zethu zezinwele ezigoqekile.
Okunye okudumile kwezinwele okumlukiwe okude, iphonayila ephothiweyo inezinto eziningi ezihlukahlukene. Ukubukeka komsila wehhashi kwakudala kodwa okunomluko futhi kungagqokwa kusukela ekhaya kuye ehhovisi ukuya ekuphumeni.Valelisa izinwele ze-Zoom eziyisicefe!
Igoda elinguhafu elilukiwe
Le hairstyle Black isebenza kahle nezandiso zethu zezinwele ezigoqe ezijulile
Ungenza umluko wesi-French ohlanekezelwe - umluko owuhhafu othandekayo obheke ngemuva futhi oqiniswe ngomsila wehhashi noma umluko wokuphakelayo owehla uhhafu ukuya phansi. Usayizi ohlukile womluko wesiFulentshi obuyela emuva ekupheleni kohhafu wegoda unikeza umphumela wokubuka omuhle.
Izandiso ezingeziwe zingadala ubude obufunayo. Isandiso osikhethayo singakunikeza ukubukeka kwezinwele ezigobile okuthandwa kakhulu, noma ukubukeka kwe-kinky curly kwencazelo eyengeziwe. Ukuze uthole ukubukeka okufana nalokhu, uzodinga kuphela izinyanda ezimbili, kodwa ukuze uthole i-Va Va Voom eyengeziwe khona-ke izinyanda ezintathu zizokwenza ubuqili.
Ngeke wenze iphutha ngesitayela sezinwele esilukiwe esinde.Kudinga indlela yokuluka ngaphansi ukuze uthole lawo magoda aphakanyisiwe alandelanayo - ama-cornrow Ungakwazi ukugoba izinwele uhlehle noma uzihlanganise nezinye izitayela zezinwele ezilukiwe ezinde njengemiluko yebhokisi ngemuva. Ungahamba isikhathi eside njengoba ufuna - ngisho kodwa ubude ngama-cornrow braids akho. Ngalokhu kubukeka, ingagqokwa nanoma iyiphi Iqoqo lethu le-Curly. Inqwaba eyodwa yikho konke okudingayo kule ponytail elukiwe kalula.
BONA INDLELA IVIDIYO
Yenziwe yaduma ukubukeka kuka-Beyonce ku-albhamu yakhe edumile, i-Lemonade, lesi isitayela esinezinhlobonhlobo eziningi, esilukiwe esincane. Kwenziwe kahle kakhulu ngezinwele ze-kinky curly noma isandiso sezinwele ezigobile ezijulile, ungenza imiluko yakho ye-lemonade njenge-updos, ponytails, noma i-loose. Ingxenye ebalulekile yalesi zinwele izinwele ezihlukaniswe ngobunono ezenziwe zaba ama-cornrow ahlanzekile nakakhulu asuka kwesokunxele aye kwesokudla noma okuphambene nalokho - hhayi aqonde emuva njengoba kwenza ama-cornrow avamile.
Uma ufuna lokhu kubukeka, vele uhlole okuthunyelwe kwethu kokuthi 2020 izinsiza ze-fall ezingalungele i-ponytail ephothiweyo.
Noma uma ubone ukubukeka kwakho kwezinwele ezinde ezilandelayo ezilukiwe, dlulela kwezandiso zethu zezinwele ezisontekile zekinky noma yethu t24>izandiso zezinwele ezigobile ezijulile ukuze uthenge izinwele zekhwalithi ephezulu ukuze wenze ama-braids akho alandelayo.
Tags: braid styles, braided hairstyles, curly hair looks, fall hairstyles, hair ideas, hairstyle ideas, half up half down style, lemonade braids, natural hair, ponytails, protective styles, trendy hairstyles, updos